CIYAARAHA CAALAMKA | Ciyaaro Online | Page 4
Home - CIYAARAHA CAALAMKA (page 4)
Ernesto Valverde: ‘Waxaan rajeyneynaa in Dembele uusan ka tegin Barca Sanadkan’
Barca macallinkeeda ayaa si xooggan uga hadlay natiijada kulankii ay la qaateen kooxda Villarreal. “Dhammeystirka Goolasheenna ayaa suuragal ka dhigay hanashadeenna La Liga xataa inagoo aan Khasaarin marna. Laba kulan ayaa u hartay Iniesta, waxaana uu ka mid yahay xiddigaha horyaalka la tegaya iyagoon laga badin haddana kooxda ka tegaya.” “Waxaanse isku deyi doonnaa in Dembele. Uusan kooxda ka dhaqaaqin, ...
Real oo guul darro la kulantay ka hor Finalka Champions League
Kooxda Kubadda Cagta Real Madrid ee dalka Spain ayaa xalay guul darro kala kulantay dhiggeeda Sevilla kaddib ciyaar xiiso badneyd oo dhexmartay labada kooxood. Kabtan Sergio Ramos,ayaa gool iska dhaliyay,mid dhaliyay,gool ku laadna cunay,waxaana xalay uu Garoonka ku lahaa saameyn gaar ah maaddaama shabaqa labada kooxood uu taabtay. Ciyaarta waxaa ay ku soo dhamaatay 3-2 oo ay guusha ku raacday Sevilla,waxaa ...
Man City oo dhigtay rikoor dhinaca gool dhalinta ah
Barcelona oo dhinaceeda dhulka la dhigi la’yahay,xalayna waa badisay.
Asrenal oo laga badiyay kulankii 7aad oo xiriir ah ee ay dibadda ku ciyaarto.
Juventus oo ku dur durisay AC Milan kuna guuleysatay Koobkii
Kooxda Kubadda Cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa markii 4aad oo xiriir ah xalay hanatay Koobka lagu magacaabo Coppa Italia kaddib markii ay garaacday AC milan Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-0,taas oo ka dhigay in AC Milan si fiican loogu sheegay in laga awood badan yahay,waxaana sidaas ku dabaaldegtay Kooxda Kubadda Cagta ee Juventus. Juve waxaa ay sidoo kale isu ...
Chelsea oo ka hartay UCL, Huddersfield oo ka badbaadday heerka 2aad
Yaa ka mid ah shanta xiddig ee ay xagaagan beegsaneyso Barcelona?
Kooxda Barcelona ayaa xili ciyaareedkaan waxaa uu u ahaa mid aad u weyn maadma ay horyaalka Spain ay ku guleysteen iyagoo aan laga badinin. Barcelona iskastoo ay ka hartay koobka Chapions league hadana sanadkaan waxaa ay ku guuleysatay laba koob. Si loo hormariyo guulaha kooxda, waxaa Barcelona ay sanadka dambe damacsan tahay inay Camp nue keento ciyaaryahano badan. Hadaba waxaan ...
Sergi Roberto oo la ganaaxay 4 kulan
Xiriirka Kubbadda Cagta Dalka Spain ayaa afar kulan ganaaxay xiddigga u ciyaara Kooxda Barcelona ee lagu magacaabo Sergi Roberto. Xiddiggan ayaa kaarka cas oo toos ah qaatay markii uu xusul iyo waji xagatin isugu daray xiddigga u ciyaara Kooxda Real Madrid ee Marcelo. Xiriirku waxaa ay sheegeen in Sergi Roberto uu si qalad ah xusul ugu dhuftay Marcelo kulankii todobaadka ee El ...
Everton oo Wenger u ballan qaadday mushaarkii Arsenal
Kooxda Kubadda Cagta Everton ee dalka Ingiriiska ayaa la xaqiijiyay in ay ugu dhowdahay la wareegidda tababaraha Reer France ee ka tagaya Kooxda Arsenal. Wenger ayaa sheegay in uu helayo codsiga kooxo badan oo uu sheegay in ay ka badanyihiin sida uu filayay,waxaana uu sheegay in uu qiimeynayo codsiyada kooxaha kala duwna ee daneynaya. Kooxda Everton ayaa dooneysa in ay ...
Wararkii ugu dambeeyay dhinaca suuqa
Suuqa kala iibsiga xagaaga ayaa furmi doona maalmo kadib iyada oo si Rasmi ah loo furi doono dhamaadka horyaalada ugu waaweyn yurub oo ku jira marxaladihii ugu dambeeyay. Suuqa xagaaga oo noqon doona mid si weyn lacago loo kharash garayn doono ayaa furmi doona wakhti dambe oo bishan aynu ku jirno ee May. Koox walba ayaa u diyaar garoobi doonta ...
Totti oo taallooyin looga sameeyay Roma
Xiddiggii hore ee Kooxda Roma Francesco Totti,ayaa taallo looga dhisay Magaalada Roma ee Caasimadda Dalka Talyaaniga. Wargeyska Il Romanista ee ka soo baxa Magaalada Roma aya sheegay in Taallooyinka loo dhisay Totti la soo bandhigayo 10 ilaa 12ka Bisha May islamarkaana xarig jarkeeda lagu casuumay marti badan. Taalladan waxaa ay ka mid noqon doontaa xusuusta Magaalada Roma ee caasimadda Talyaaniga iyo naf ...